Mars Taxanaha qaybsan UPS isticmaalaa technology diinta sare hufan online double, iyo hufnaanta ay gaari karaan 94.5%. Oo aan xuduud lahayn ka midaysan la naqshado qolka macluumaadkii ugu dambeeyey, kaas oo ah a-halaynta sare nidaamka UPS qaybsan scalable siyaado ah.
Taxanaha Mars qaybsan UPSnidaamka la naqshadaha aad u dabacsan, iyo waxa ee modules xoog isticmaalaya online design kulul-swappable, taas oo si fudud loo saari karaa, rakibay oo lagu hayo marka nidaamka la socda, laakiin aan lahayn saamayn ku hawlgalka nidaamka iyo wax soo saarka, taas oo ka dhigtay qorshe maalgelinta yimaado run sida ay looga baahan yahay. Taas oo laga yabaa in labadoodaba si ay ula kulmaan qalabka user kordhin u baahan yahay waqti dambe, laakiin sidoo kale loo yareeyo kharashka gadashada hore.
Taxanaha Mars qaybsan UPSbixisaa 20KW iyo xoogga 30KW modules iyo laba nooc oo ah nidaamka armaajooyinka, user la furfurmi qaybiyay kartaa sida ay baahida load ah. Golaha wasiirrada hal gaari karo awoodda ugu badnaan ilaa 210KW, iyo in la siiyo 2 nooc ups nidaamka of 90KW iyo 120KW, taas oo la dhisay-in modules batari, waayo, dadka isticmaala si fudud u dooran noqon kartaa.
oolnimada 1.High technology online double diinta
Taxane Mars UPS qaybsan waxaa laga codsadaa technology online diinta double la waxqabadka sare ka badan 94.5% 50% load. Waxaa si weyn u yaraynaysaa guud Kharashka Total ee Lahaanshaha (TCO).
control DSP bixisaa xal loogu kordhinayo waxqabadka sare. Dhexgeliyey design qaybsan iyo technology isku midka ah, nayaa mustaqbalka ballaarinta awoodda.
factor awoodda wax soo saarka 3.Unity
taxane Mars samatabbixiyaa awoodda wax soo saarka midnimada (KVA = kw) bixinta awoodda xoog ugu badnaan in ay shaqada ugu rarataan culaysyo muhiim ah. Waxaa dhergiyaa shuruudaha ka mid ah server ugu dambeeyay iyo IT optimizes maalgashi la beesadda kasta.
design 4.Modular hoos MTTR
design qaybsan waxaa laga codsadaa in module xoog, module gebagaboobaya iyo module batteriga. Waxay fududayn doonaan dayactirka iyo bedelka la hooseeyo MTTR (Time Mean Si Repair).
5.Ease rakibaadda iyo dayactirka
Dhisay-in isku tallaalidda dayactirka xaqiijinaya awood joogto ah si ay ugu rarataan culaysyo muhiim ah inta lagu guda jiro dayactirka UPS. Ka sokow, si loo fududeeyo rakibida iyo dayactirka, oo dhan gacanta guddi oo Xidhiidhiyayaasha yihiin helitaanka hore.
qaabeynta batari 6.Flexible islana codsiyada kala duwan
lambarada Battery furfurmi waxbaa laga beddeli karaa. Waxaa la qabsan doono dalabaadka awoodda kala duwan iyo soo gaabin nidaamka ka maqnaa. danab Battery lagu hagaajin karo 32 ilaa 40 gogo 'halkii string.
xukun 7.Adjustable hadda
Wuxuu bixiyaa ugu badnaan xukun 8A hadda module awood kasta oo ay tahay hagaajin ku saleysan looga baahan yahay.
awood dollar 8.High
Qaybsan UPS taageertaa, 110% dollar 60 daqiiqo, 120% muddo 10 daqiiqo ah, iyo 150% 1 daqiiqo.
9.Graphic 5.7 "design LCD ee maamulka fudud
Loogu talagalay maamulka fudud, qalabaysan 5.7 "screen LCD graphic. design dareen wanaajisaa macluumaad bandhigay aqoonsaday iyo qaabeynta horumarsan.
10.N + 1 ama N + X shaqo isku midka ah, waayo, damaanad awood
naqshadaha scalable kuu ogolaanaya in aad tayadoodii kharashka qiimaha si ay u daboolaan dalabaadka xoog by vertical ballaarinta waa xero a hayayaashii hal ka 20KVA in 210KVA iyo gaaro N + 1 ama N + X shaqo ee hayayaashii isku.
Culayska ( K Sudee)
Hadaladiisa: Mid ka mid ah module batari ku jira 10pcs of 12V9AH shaabadeeyey keeni baytariyada acid in mid ka mid saxaarad. Mid ka mid dhamaystiran set batari ku jira 4 modules batteriga.
20KVA-210KVA (Saddex-tago iyo Saddex mooraal)
Golaha Wasiirada Model
Capacity ugu badnaan
Dhisay-in Battery Module
Dibadda Battery Pack
Capacity Power Module
Golaha Wasiirada Net Culayska (Boqorradii)
305 ~ 477VAC at 100% Load; 208 ~ 304VAC at <70% Load
50 / 60Hz (Auto Ogaanshuhu)
> 0.99 @ 100% Load,> 0.98 @ 50% Load
Regulation danab (state Joogto)
≦ ± 1% Caadiga ah (Load dheeli tiran); ≦ ± 2% Caadiga ah (Load qaloocan)
Regulation danab (transient)
≦ ± 5% Caadiga ah
Range Frequency (beehsa)
46Hz ~ 54Hz ama 56Hz ~ 64Hz
1 saac 110%, 10 min 120%, 1 min 150%, 200ms for> 150%
1.5 ≦% THD (Load toosan); ≦ 4% THD (Load Non-toosan)
Battery / xeedho
danab ugu badnaan
danab Ugu Yar
Sabeyn ka faaiidaysta danab
Kor loogu qaado ka faaiidaysta danab
Hadda oogidda ugu badnaan
8A for module awood kasta (User hagaajin)
0 ~ 95% Non-isu keenida
<1000m waayo, xoog magaceed
Broadcasting iyo Television
Mars Taxanaha qaybsan UPS 20KVA-210KVA
Previous: 1-3KVA UPS hayayaashii Frequency Sare Next:40-120KVA Frequency High Online UPS (3: 3)